Other News | Artist Khabar | Page 2
Other News	दीपिका पादुकोणले गरी्न आफ्नो जन्मदिनमै १५ घण्टा काम, के काम थियो त्यस्तो ?	पुस, मुम्बई । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले बिहिबार आफ्नो ३१ औं जन्मदिन मनाएकी छिन् । सन् १९८६ मा जन्मिएकी दीपिका यतिखेरकी बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् । साथै उनले पछिल्लो समय हलिउडमा पनि काम गरीरहेकी छिन् ।
यसका साथै दीपिकाले आफ्नो जन्मदिनको दिन कुनै ठुलो पार्टि भने गरीनन् । उनले यसबर्षको आफ्नो जन्मदिन बिशेष भएको भन्दै..	प्रियंका कार्की र देबि घर्ती लगायतका आर्टिस्टले ‘फ्रेण्डशिप धमाका १६ मलेसिया’ मा धमाका मच्चाउने	पुस, मलेसिया । मलेसियामा यसबर्ष पनि 'फ्रेण्डशिप धमाका' हुनेभएको छ । फ्रेण्डशिप धमाकाको यो १६ औं संस्करण हो । मलेसियाको बिभिन्न ठाउँमा हुने यस साँस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालबाट चर्चित नायिका प्रियंका कार्की र चर्चित गायिका देवी घर्ति लगायतका आर्टिस्टहरु आउने भएका छन् ।
यसपटक पनि सबैबिधाका आर्टिस्टहरुलाई कार्यक्रममा समेट्ने आयोजकले..	कपिल शर्माले नयाँबर्षको अवसरमा नयाँ शो ल्याउँदै	पुस, नयाँ दिल्ली । बलिउडका कमेडी स्टार कपिल शर्माले २०१६ को सफलताका साथमा २०१७ को नयाँ सालको अवसरमा दर्शकहरुका लागी नयाँ कमेडी लिएर आउने भएका छन् । कपिलले आफ्नो ट्विटरमा बताए अनुसार उनले नयाँ सालका लागी दुई वटा शो दर्शकका लागी ल्याउने छन् ।
कपिलले नयाँ शोको नाम भने के हुनेछ भन्ने बारे खुलाएका छ्रैनन..	मलेसियामा यसबर्ष पनि ‘युनिक धमाका ४’ हुने, दर्शकले पाउनेछन् यसबर्ष फरक अनुभुति	पुस, मलेसिया । मलेसिया यसबर्ष पनि 'धमाका साँस्कृतिक कार्यक्रम' हुने भएको छ । बिगतका बर्षहरुमा झै यसबर्ष पनि मलेसियाको बिभिन्न ठाउँमा 'युनिक धमाका ४' हुने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक नविन खड्काले आर्टिस्ट खबरलाई दिएको जानकारी अनुसार यसबर्ष युनिक धमाकामा दर्शकले केहि फरक प्रस्तुती हेर्न पाउने छन् । यस पटक तराइमा प्रचलित भोजपुरी..	टि सिरिजले गर्यो अहिलेसम्मकै हट गीत सार्वजनिक ,१० दिनमै ३ करोडले हेरे	पुस, काठमाडौं । टि सिरिजको प्रस्तुतीमा आएका गीतमध्येको अहिलेसम्मकै हट गीत सार्वजनिक गरीएको छ । संगीतकार श्रेय सिंघले बनाएको 'जहान तुम हो' बोलको गीतको यस भिडियो यतिखेर युट्युवतिर भाईरल बनेको छ ।
टि सिरिजको प्रस्तुतीमा रहेको यस गीतलाई टि सिरिजको युट्युवमा यस समाचार तयार पार्दासम्म ५५ लाख पटक हेरिसकिएको छ भने सेन्डी नामक युट्युवबाट भने ३..	‘लचक लचक कम्मर तिम्रो’, नारायण राईको नयाँ गीत आउँदै (रेकडिंङ रिपोर्ट)	पुस, काठमाडौं । गायक नारायण राईको लचक लचक कम्मर तिम्रो बोलको नयाँ गीत आउने भएको छ । यसअघि लोक तथा आधुनिक गीत गाउँदै आएका नारायणले यसपटक केहि फरक गीत बजारमा ल्याउने भएका हुन् । आफ्नो एकल आवाजमा गीत रेकर्ड गरीसकेका उनले गीतमा संगीतपनि आँफैले भरेका हुन् ।
चलचित्रमा नेपाल र सिक्किमका स्थानीय कलाकार तथा प्राविधिकहरुलाई मौका दिइने पनि बताइएको छ । यो..	बस्ती बनाउन धुर्मुस सुन्तली मुसहर बर्दिबासमा पुगे, यसरी भयो भब्य स्वागत (फोटो फिचर)	पुस, बर्दिबास (महोत्तरी ) । मुहर बस्ती बनाउन धुर्मुस (सिताराम कट्टेल) महोत्तरीको बर्दिबास आएका छन् । उनी आउने खबरले मुसहर बस्तीकी एक सय पाँच बर्षीया मरनी सादा मंगलबार विहानै देखि खुशी थिइन । बिहानै देखि उनी बाटो कुरेर बसेकी थिइन् । धुर्मुस आएपछि हातमा राखेको माला र अविर उनलाई लगाई दिएइन् ।
मरनी बर्सौंदेखि बाख्रा बाँध्ने खोरमै सुत्दै आएकी..	सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जितेको पशुपति प्रसादले ‘नेफ्टा अवार्ड’ फिर्ता गर्ने	पुस, काठमाडौं । नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले आयोजना गरेको नेफ्टा फिल्म अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जितेको पशुपति प्रसादले अवार्ड फिर्ता गर्ने भएको छ ।
पशुपति प्रसादका निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले अन्य विधामा नपाएको फिल्मलाई सर्वोत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड दिइएकाले नैतिक रुपमा अवार्ड अस्वीकार गर्ने बताएका छन्..	रेखा शाहको स्वरमा रहेको ‘तिमी बिना’ को गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक	पुस, काठमाडौं । गायिका रेखा शाहको स्वरमा गीत ‘तिमी बिना...’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । म्युजीक भिडियोेलाई गायीका शाहले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै सार्बजनिक गरेकी हुन ।
मुम्बइको एसराज स्टडियोमा एरेञ्ज तथा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतमा कमल खत्रीको संगीत छ भने गीतका शब्दहरु गीतकार भूपेन्द्र खड्काले रचना गरेका हुन ।..	Pages:«1234567...40»